🥇 ▷ Xaashida macluumaadka 'Huawei Mate 30 Pro' waa mid dhameystiran: kamarad-quad-camera, batari weyn iyo Android 10 (sawir) ✅
Xaashida macluumaadka ‘Huawei Mate 30 Pro’ waa mid dhameystiran: kamarad-quad-camera, batari weyn iyo Android 10 (sawir)
Huawei-ka cusub ee cusub ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa dhowr maalmood, tan xigta 19 Sebtember Munich dhexdeeda, laakiin wixii ka soo baxa koontada ay ka muuqato ma muujinayaan calaamad joojin. Faahfaahin cusub ayaa lagu soo daayay Mataanka soo socda 30 kaas oo xaqiijinaya kuwii horay u soo shaac baxay.
Sawirada lagu muujiyey gallery hoose Muuji taageerada loo adeegsan doono Mate 30 Pro oo lagu meelayn doono mar haddii Suuq lagu iibiyo Shiinaha: Saldhiggu wuxuu muujinayaa astaamaha ugu weyn ee farsamo ee u dhigma SoC-da cusub Kirin 990, Qolka Quad gadaal wuxuu ka kooban yahay laba dareemayaal ka 40 megapixels, mid ka 8 megapixels telephoto iyo dareeme afraad ah qoto dheer. Intaa waxaa sii dheer, waa in aan helno batteri awood u eg 4,500 mAh oo leh taageero dhakhso leh a 40W in habka silig iyo a 27W wireless.
AKHRISO: sidoo kale Android 10, dib u eegistayada
Saldhigga taageerada ee lagu muujiyey sheybaarka wuxuu kaloo xaqiijinayaa in Huawei Mate 30 cusub la cusbooneysiin doono EMUI 10 ku saleysan Android 10. Intaas waxaa dheer, waxaan sidoo kale arki karnaa awoodda batteriga ee kala duwanaanta heerka ee Mate 30, taas oo u dhigmi doonta 4,200 mAh.
Waxaa jira sawir saddexaad waxaa lagu muujiyaa sawirka gadaasha Mate 30 Pro ee midabaynta cagaaran: garan mayno haddii ay ugu badan tahay sababta filimka lagu dalbaday taleefanka casriga ah; Dhab ahaantii waxaan ku aragnaa batoonka bidixda ee midabaynta Orange.
Dhanka: SlashLeaks (1), (2)Xigasho: IT Home, Weibo